गोविन्द बन्दी माधव नेपालको कोटाबाट ६ महिने मन्त्री बन्ने लाइनमा ! | नेपालन्युज
गोविन्द बन्दी माधव नेपालको कोटाबाट ६ महिने मन्त्री बन्ने लाइनमा !
सत्ता गठबन्धनले निरन्तर छलफल गरेपनि अहिलेसम्म मन्त्रालयको भागवण्डामा सहमति जुटाउन सकेको छैन् । मन्त्रालयको संख्या कसलाई कति दिने भन्ने विषयमा लगभग सहमति जुटेपनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयमा भने नेताहरुबीच अझै सहमति जुट्न नसकेको हो ।
मंगलबार मात्रै बालुवाटारमा बसेको बैठक निष्कर्ष विहिन भएको छ । अब शीर्ष तहबाट नै यो विषय टुंगो लगाउने समझदारी नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरुभित्र पनि कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यसैबीच माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । मेटमणी चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मुकुन्द न्यौपाने लगायतको नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेको बताइन्छ । उनीहरुसँग बन्दीलाई पनि बढीमा ६ महिनाका लागि भएपनि मन्त्री बनाउने तयारी नेपाल नेतृत्वको पार्टीले गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा त्यसको विपक्षमा माहोल निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएका अधिवक्ता बन्दीलाई कानून मन्त्री नै बनाउने तयारी भएको स्रोत बताउँछ । उनी मन्त्री भएमा कार्यकल भने ६ महिनाको मात्रै हुनेछ । संविधान अनुसार कुनै गैरसांसद व्यक्तिलाई बढी ६ महिनाभित्र मात्रै मन्त्री बनाउन मिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उनलाई मन्त्री बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र समेत छलफल भइसकेको बताइएको छ। यसअघि बन्दीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो। तर त्यतीबेला नेताहरुबीच सहमति जुटेको थिएन् ।
उनी दैलेखका स्थायी बासिन्दा हुन् ।